१०६ मेगावाटकाे जगदुल्ला जलविद्युत् निर्माण हुँदै, लागत कति ? - नेपालबहस
१०६ मेगावाटकाे जगदुल्ला जलविद्युत् निर्माण हुँदै, लागत कति ?
| १२:५१:२४ मा प्रकाशित
१३ फागुन, जाजरकोट । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम सम्पन्न भएको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै आयोजना निर्माणको कूल लागत १९ अर्ब ९० करोडको लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२२ अर्बबाट लागत रकम घटेर १९ अर्बमा झरेको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । इलमा ६३ घरधुरीको ७१ रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी पाँच लाख ५० हजार र काइगाउँमा १८७ रोपनी १०० घरधुरीको प्रतिरोपनी पाँच लाख १५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण कार्य पूरा भएको छ ।
कूल ३०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि अहिले भौगोलिक विकटताका कारण १०६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो चरणमा २५८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । अर्धजलाशयका रूपमा थालिएको आयोजना छ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
करिब सात दशमलव एक किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित ३०० मिटरभित्र रहेको विद्युत् उत्पादन गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २३ मिटर उचाइ र १०० मिटर चौडाइको जलाशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ । छ घण्टा पानी थुनेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । विस्तृत परियोजनाको जिम्मा एनइए इञ्जिनीयरिङले २७ करोडमा लिएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि १० प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीले हाल्न पाउनेछन् । सरकार आफैँ र स्थानीयवासीलाई शेयर दिएर यो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अहिले विद्युत् उत्पादन गृहको माटो जाँचका लागि ३०० मिटरभित्र सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै इलमा समेत पुल निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिवेणीदेखि इलसम्मको सडक ट्र्याक छिटो खोलेमा आयोजनाको कामसमेत छिटो हुने आयोजनाको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत्का लागि इलस्थित फेदीखोलाबाट दुई मेगावाट र काइगाउँस्थित स्थानीय खोलाबाट दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भाव्यताको काम शुरु भएको छ । आयोजना निर्माणस्थल बाँधस्थलमा घर नभएका कारण आयोजना निर्माणका लागि समस्या नभएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै तीन करोडको जगदुल्लाबाट मुड्केचुलाको सर्मीसम्म सडकको काम शुरु भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन मुस्किल परेको छ । काइगाउँबाट मुड्केचलासम्म जोड्ने सडकको काम रु पाँच करोडमा शुरु गरिएको प्रदेशसभा सदस्य शाहीले जानकारी दिए।
८२ मेगावाटको ‘जगदुल्ला ए’ जलविद्युत्आ योजना निर्माण गरिने
एक सय छ मेगावाट क्षमतामा निर्माणको तयारी भइरहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले ८२ मेगावाटको ‘जगदुल्ला ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको तयारी गरेको छ । आयोजनाको डिपिआर सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाको राय सङ्कलन पनि गरिसकिएको आयोजना प्रमुख सापकोटाले बताए ।
क्यासकेड आयोजनाको रूपमा जगदुल्ला ए निर्माण गर्दा अर्धजालाशयको लागत पनि घट्ने र दुवै आयोजनालाई आकर्षक आयोजना बनाउन सकिने बताइएको छ ।
सरकार र स्थानीयवासीले सेयर हाल्न पाउने
विद्युत् उत्पादन कम्पनीअन्तर्गत बनेको जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीमा अतिविपन्न परिवारलाई दुई प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ । आयोजनामा सर्वसाधारणका लागि १७ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि १० प्रतिशत शेयर दिने बताइएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष र दूरसञ्चार कम्पनीको १०/१० प्रतिशत शेयर छ । अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र नागरिक लगानी कोषको पाँचरपाँच प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको चार प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई प्रतिशत प्रवद्र्धक शेयर रहेको छ ।
९० लाखको लागतमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य शुरु १ दिन पहिले
माथिलो चाकु जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न १ हप्ता पहिले
पाँच दिनदेखि अन्धकारमा बस्दै नागरिक १ महिना पहिले
चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन बन्द १ महिना पहिले
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता २२ मिनेट पहिले
ओली सरकारको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको संरक्षण ३४ मिनेट पहिले
यसकारण प्रचण्डको पछि लाग्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती ५० मिनेट पहिले
पाँच कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता मूल्य कति ? ७ घण्टा पहिले
भानुभक्त प्राणी उद्यानमा चरा अवलोकन ५ घण्टा पहिले
किरण भुजेलको ‘मन खाने माया’ ४ दिन पहिले
वन क्षेत्रमा आगलागीका घटना वृद्धि ६ दिन पहिले
माडीको अयोध्यामा राखिने मुर्ति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १ दिन पहिले
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक : नवीकरणका काम र समायोजनबारेमा छलफल ४ दिन पहिले
तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न मन्त्रालयलाई प्याब्सनकाे सुझाव ३ दिन पहिले
असहाय तीन परिवारलाई घर हस्तान्तरण ४ दिन पहिले
देउवाकै गृह जिल्लामा प्रेस युनियन पराजित ७ दिन पहिले
चैताबारुवाँसम्म घर आएन भने जुम्ली म¥यो भुनि जान्नु २ हप्ता पहिले
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम परियोजना निर्माणमा तीव्रता, वैशाखसम्म सञ्चालनमा आउने २ वर्ष पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको रामराजा प्रतिष्ठान नीति तथा कार्यक्रममा परेन, जिल्लावासी संशकित ११ महिना पहिले
प्रदेशले विपत् व्यवस्थापन कोषमा गर्यो ५० करोड रकम विनियोजन १ वर्ष पहिले
बजार मूल्यभन्दा अलैँचीको भन्सार मूल्य दोब्बर ७ महिना पहिले